मोन्सान्टोलाई २९ अर्ब तिर्न आदेश - विश्व - कान्तिपुर समाचार
मोन्सान्टोलाई २९ अर्ब तिर्न आदेश
विषादी उत्पादक कम्पनीका सामग्रीले क्यान्सर भएको फैसला
श्रावण २७, २०७५ एएफपी
क्यालिफोर्निया — बीउबिजनसम्बन्धी बहुराष्ट्रिय कम्पनी मोन्सान्टोलाई अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित एक अदालतले २८ करोड ९० लाख डलर (करिब २९ अर्ब रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ ।
मोन्सान्टो कम्पनीका उपाध्यक्ष स्कट प्याट्रिज सान फ्रान्सिस्कोमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै । तस्बिर : एजेन्सी
डिवेन जनसनले ‘ग्लाइफोसेट’ नामक झारनाशक विषादीले आफूलाई क्यान्सर भएको दाबी गर्दै दायर गरेको मुद्दामा मोन्सान्टोलाई दण्डात्मक हर्जना तिर्न आदेश दिइएको हो ।
एउटा ऐतिहासिक मुद्दामा क्यालिफोर्नियाको एक अदालतले मोन्सान्टो कम्पनीका ‘राउन्डअप’ र ‘रेन्जरप्रो’ नामक झार नष्ट गर्ने विषादी खतरनाक रहेको र त्यसबारे उपभोक्तालाई कम्पनीले उपभोक्तालाई सचेत नगराएको भन्दै उक्त जरिवाना गरिएको हो । ग्लाइफोसेट नामक विषादीले क्यान्सर हुने दाबीसहित अदालतमा पुगेको यो पहिलो मुद्दा हो ।
मोन्सान्टो कम्पनीले भने ‘राउन्डअप’ सुरक्षित भएको दाबी गर्दै उक्त आदेश नमान्ने बताएको छ । उसले अदालतको आदेशको कम्पनीले पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।
‘वैज्ञानिक परीक्षण र त्यसको निष्कर्ष तथा दशक लामो अनुभवका आधारमा ती विषादीहरूमा प्रयोग हुने ग्लाइफोसेटले क्यान्सर हुँदैन,’ मोन्सान्टोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘जुरीले यसलाई गलत रूपमा लिएका छन्,’ सान फ्रान्सिस्कोस्थित अदालतबाहिर उक्त कम्पनीका उपाध्यक्ष स्कट प्याट्रिजले भने ।
मुद्दाका उजुरीकर्ता डिवेन जनसनले आफूले अमेरिकाभरका करिब ५ हजारको प्रतिनिधित्व गरेको जनाए । उनले ‘क्यालिफोर्नियाले गरेको आदेशले मोन्सान्टोविरुद्धका अन्य सयौं उजुरीको प्रतिनिधित्व गर्ने जनाए । ‘म अदालतका न्यायाधीशलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ फैसलापछि ४६ वर्षीय जोनसनले भने, ‘म यहाँसम्म आएको छु । तर यसको कारण निकै ठूलो छ ।’
जनसनलाई सन् २०१४ मा एक प्रकारको क्यान्सर लागेको देखिएको थियो । उनका वकिलहरूले उनले क्यालिफोर्नियाको बेनिसियास्थित विद्यालयमा काम गर्दा निरन्तर रूपमा रेन्जरप्रो नामक झारनाशक विषादी प्रयोग गर्ने गरेकाले क्यान्सर भएको दाबी गरेका छन् ।
मोन्सान्टो कम्पनीको उत्पादन ‘राउन्डअप’ ।तस्बिर : एजेन्सी
न्यायाधीशहरूले मोन्सान्टो कम्पनीको झारनाशक विषादीले जनसनलाई अहिले जस्तो रोगी बनाउन उल्लेख्य भूमिका खेलेको निर्णय गरेका हुन् । ग्लाइफोसेटको प्रयोग लामो समयदेखि विवादित रहेको छ । राष्ट्रसंघको एक अध्ययनले पनि ग्लाइफोसेटका कारण क्यान्सर हुन सक्ने जनाएको छ । तर केही वैज्ञानिकहरूले भने यसको प्रयोग सुरक्षित हुने दाबी गर्छन् । करिब २ महिना लामो सुनुवाइपछि न्यायाधीशहरूले कृषिसम्बन्धी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई उक्त रकम क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएका हुन् ।
प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ ०८:३१
‘मलाई थाहा छ, तिमीलाई के चाहिन्छ ?’
पुुल्चोक — ‘मलाई थाहा छ, तिमीलाई के चाहिन्छ ?’ यिनै शब्दहरूसहित कालो प्लेकार्ड बोकेर चित्रकार अस्मिना रञ्जित अघिल्तिर उभिइन् । उनको पर्फमेन्स आर्ट हेर्न भेला भएकाबीच कानेखुसी चल्यो । धेरैले धेरैथरी अड्लबाजी गरे ।
ललितपुर बखुण्डाेलस्थित नेक्सस सेन्टरमा पर्फमेन्स अार्ट प्रस्तुत गर्दै चित्रकार अस्मिना रञ्जित । तस्बिर : कबिन अधिकारी । कान्तिपुर
शनिबार बखुन्डोलस्थित नेक्सस सेन्टर नेपाल (लसना) मा अस्मिना भने हाम्रै समाज, राजनीति र संस्कृतिमा व्याप्त एउटा प्रवृत्तिमाथि व्यंग्य कस्दै थिइन् । सम्बन्धित व्यक्ति या समुदायको भावना बुझदै नबुुझी जबर्जस्ती बुुझेको आवास दिलाउने नेता, सरकार र व्यक्ति विशेषको प्रवृत्तिमाथि अस्मिनाले पर्फमेन्स आर्टमार्फत झँटारो हानेकी हुन् ।
एक सातादेखि जारी पर्फमेन्स आर्टअन्तर्गत शनिबार छैटौंं दिन अस्मिनाले ‘भ्वाइस (लेस)’ थिममा करिब एक घण्टा निरन्तर प्रस्तुति दिएकी हुन्, जहाँ थुप्रै रंगीन कागजमा दर्शकले आफ्नो चाहना लेखेरे उनलाई दिने गर्थे । कालै पहिरनमा उजिएकी अस्मिनाले कालो प्लेकार्डमा एउटै वाक्य लेखेर पठाउँथिन्, ‘मलाई थाहा छ, तिमीलाई के चाहिन्छ ?’
‘आर्ट स्पेस अस्ट्रेलिया’, ले साउथ एसिया भरका ५२ कलाकारका ५२ काम पस्किने योजनाअन्तर्गत अस्मिनाले पर्फमेन्स गरेकी हुुन् । यसअन्तर्गत उनले एक हप्ताभर विभिन्न थिममा गतिविधि गरिन् । हरेक दिन देखाएका प्रस्तुतिलाई इन्स्ट्राग्राम र सामाजिक सञ्जालमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच पुर्‍याउने गरी प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत गरिएको थियो । विश्वभरका कलाप्रेमीले एकसाथ उनको कला नियालेका थिए ।
दक्षिण एसियाका ५२ कलाकारका काम हेर्दा प्राय: सबै जनाले आफू केन्द्रित सिर्जना बनाएका छन् । अस्मिनाले भने पर्फमेन्स आर्ट भनेकै सामूहिक रूपमा गरिने कला रहेको दाबी गर्दै यसमा धेरै कलाकार र व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउँदै आएकी छन् । पर्फमेन्स आर्टलाई सामाजिक अभियानहरूमा समेत अर्थपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले सकेसम्म समूहमा हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
पहिलो दिन उनले बालबालिकालाई नाटक प्रस्तुत गर्न लगाउँदै उनीहरूको मनोभावलाई स्थान दिइन् भने दोस्रो दिन फिल्म प्रदर्शनी गरिन् । ‘सुनगाभा’, ‘इन्स्पाइरेसनल पिपुल फ्रम नेपाल’ र ‘सीता सिङस् अफ ब्लुुज’ गरी भिन्नभिन्नै थिमका तीन फिल्म उनले देखाएकी थिइन् । शुक्रबारचाहिँ उनले अहिलेको ताजा विषय बनिरहेको डा. गोविन्द केसीको अनशनका सन्दर्भ जोडेकी थिइन् । सास फेर्न गाह्रो भएको भाव झल्काउन उनले अक्सिजन माक्स प्रयोग गरेकी थिइन् ।
आइतबार एकहप्ते कला यात्राले बिट मार्दै छ । समापनको दिन उनी विभिन्न स्थानबाट आएका महिला एक ठाउँ राखेर गोलमेच सम्मेलन गर्ने योजनामा छिन् । ‘यस्तो गोलमेच कि कुनै पनि मेच पदीय हिसाबले तलमाथि हुने छैन,’ उनले भनिन्, ‘एकै ठाउँ सबै जना समान हैसियतमा बस्नेछन् । र, समान हैसियतमै उनीहरूले आ–आफ्ना मत राख्नेछन् ।’
पर्फमेन्स आर्ट किन ?
शनिबार झन्डै एक घण्टाको पर्फमेन्स आर्टमा सहभागीमध्ये कतिले ध्यान गरेको जस्तै आनन्दको अनुुभूति गरे, कतिले चाहिँ के गरेको हो बुुझ्नै सकेनन् । धेरैले अस्मिनालाई ‘के भन्न खोजेको हो ?’ भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए ।
सन् २००० देखि निरन्तर पर्फमेन्स आर्ट देखाउनै आएकी अस्मिनाले यस्तो आर्ट फर्ममा बुुझ्ने र नबुुझ्ने दुवै दर्शक भेटिने बताइन् । ‘पहिलो पटक हेर्ने त झनै ठम्याउँनै सक्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘यो शरीरको हाउभाउ देखेर महसुुस गर्ने दृश्यकला हो ।’ चित्रकलादेखि इन्स्टालेसन आर्ट हुँदै पर्फमेन्स आर्टसम्म अनुवभ बटुुलेकी अस्मिनाले कलाको फराकिलो रूप भनेकै पर्फमेन्स आर्ट भएको दाबी गरिन् । ‘खुलेर भन्न सक्ने क्यानभास नै पर्फमेन्स आर्ट हो,’ उनी भन्छिन् ।
अस्मिनाको पर्फमेन्स आर्टको प्रत्यक्ष दर्शक बनेका चित्रकार कपिलमणि दीक्षित निकै रमाएका थिए । उनले आफ्नी छोरीलाई बारम्बार पर्फमेन्स आर्टका गतिविधिमा संलग्न हुन प्रेरणा पनि दिइरहेका थिए । दर्शकले कलाकारसँगै भावना पस्किन सक्ने रमाइलो प्लेटर्फम पफमेन्स आर्ट हुने हुँदा कपिल यसप्रति प्रभावित भएका हुुुन् । कहिलेकाहीँ कलाकारको विचार अमूर्त चित्र जस्तो भइदिन्छ । त्यति बेला विषय बुुझ्न गाह्रो भएर पर्फमर स्वयंलाई सोध्नुपर्ने स्थिति आउने कपिलले सुनाए ।
प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ ०८:२७
विन्दु अधिकारी ढकाल श्रावण २२, २०७७